समाचार - भरिने मेसिनको लागि कole्गोलिस ग्राहकको भ्रमण
नोभेम्बर, २०१ China मा दोस्रो चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोको समयमा अफ्रिकी प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण अफ्रिकाको क Cong्गोबाट शंघाई आइपुगेको छ। मालिकहरूले भ्रमण गरेका र जाँच गरिएका मेशिनहरू, उनीहरूको अनुसूचीमा हाम्रो कारखाना कुञ्जी भरिने मेसिन आपूर्तिकर्ता हो।
हामी, हिजी मेशीनरी, एक निर्माण आधारित आपूर्तिकर्ता, भरिने, क्यापिंग, लेबलिंग र प्याकिंग मेशिन लाइनको बिभिन्न प्रकारका उत्पादनहरूको क्षेत्रमा लगभग २० वर्षको अनुभवको साथ। हामी प्रोफेशनल एक स्टप भरने लाइन समाधान प्रदाता हो। तिनीहरूको व्यापार यात्रामा, हाम्रो ग्राहकले पानी पूर्व उपचार प्रणालीको सल्लाह लिए, जसमा क्वार्ट्ज बालुवा फिल्टर, सक्रिय कार्बन फिल्टर, आरओ प्रणाली, ओजोन स्टेरिलाइजर, पानी ट्या water्की समावेश छ। र तीनिहरूले हाम्रो of मा १ मोनोब्लोक कोला रिन्सि,, भर्न र क्यापिंग मेशिन लाइनको परीक्षण पनि गरे। अन्तत: हामी अफ्रीकामा बोतल पानी उत्पादन लाइन बेच्न बिक्री, शिपिंग दिन, भुक्तान अवधि र बजारको बारेमा एक बैठक गर्छौं।
कo्गोमा अफ्रिकी प्रतिनिधिमण्डलको एउटा समाचार छ कि सरकारले स्थानीय बजारमा उत्पादकलाई साचेट पानी उत्पादन गर्न निषेध गर्दछ।
सचेट पानी भर्ने र प्याकिंग मेसिन अहिले अफ्रिकाको अन्य क्षेत्रमा तातो उत्पादन हो। तर भविष्यमा नयाँ बोतलयुक्त पानी उत्पादन लाइन स्थापना गर्नेबारे उनीहरूले सोच्न आवश्यक छ।
अफ्रिकी प्रतिनिधिमण्डलले उपयुक्त मेशीन पत्ता लगाए, चिनियाँ खानाको मजा लिने, मेशिन परीक्षण हेरे। उनीहरूले हाम्रो कार्यशाला, बैठक कोठा, उत्पादन विभाग, गोदाम र प्रबन्ध साइटको दौडान हाम्रो राम्रो कन्फिगरेसन र S एस प्रबन्धन अनुभवको उच्च प्रशंसा गर्छन्। हामी हाम्रो निर्माण गुणमा गर्व पनि गर्दछौं र एक अर्काको सहयोगको कदर गर्दछौं। Higee मशीनरी, पेय, पेय र पानी भरने क्यापिंग, लेबलिंग र प्याकेजि line लाइन को सबै प्रकारको लागि तपाइँको राम्रो विकल्प। हामीलाई भेट्न स्वागत छ! हामी सँधै यहाँ तपाईको लागि पर्खिरहेका छौं!
पोष्ट समय: Dec-18-2019